देशभरका निर्वाचन क्षेत्रमा सेना परिचालन – Chitwan Post
चितवनको प्रत्येक क्षेत्रमा ७० सेना
भरतपुर । मंसिर ४ गते हुने संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको सुरक्षाको लागि आइतबारदेखि नेपाली सेना देशभरका २४० वटा निर्वाचन क्षेत्रहरुमा परिचालन भएको छ । निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै चितवनका संवेदनशील क्षेत्रमा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीले आइतबारदेखि सुरक्षा दिन सुरू गरेका छन् ।
सरकारले ल्याएको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन २०७० एकीकृत सुरक्षा योजनाअन्तर्गत नेपाल सरकार मातहतका तीनवटा सुरक्षा अंगहरु परिचालन गरिएका हुन् । सुरक्षा योजनाअनुरूप मतदान केन्द्रको भित्री सुरक्षा घेराको जिम्मा नेपाल प्रहरी र यस मातहतमा भर्ना गरिएका म्यादी प्रहरीले लिने छन् । बीचको सुरक्षा घेराको जिम्मा सशस्त्र प्रहरीले लिनेछ भने बाहिरी सुरक्षा घेराको जिम्मा नेपाली सेनाका जनशक्तिहरुले लिने छन् ।
सुरक्षा योजना अनुरूप निर्वाचन हुन एक महिना अघिदेखि नेपाली सेनाको परिचालन गर्ने भनेअनुसार चितवन जिल्लाका पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली सेना परिचालन गरिएका छन् । नेपाली सेना आफ्नो जिम्माअनुसार हत्तिबाङ, लोथर, मेघौली र माडीको अयोध्यापुरीमा पुगेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
चितवनमा निर्वाचन सुरक्षाको लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक÷एक कम्पनी सेनाका जनशक्ति खटिने बताइएको छ । एक कम्पनीमा ७० जना सेनाका जनशक्ति रहने छन् ।
त्यस्तै, निर्वाचन अवधिभर नेपाल प्रहरीका जनशक्ति अभाव हुने हुँदा नेपाल प्रहरीले सुरक्षा जिम्मा लिँदै आएका जिल्लाका संवेदनशील क्षेत्रमासमेत आइतबारदेखि नै नेपाली सेना परिचालन गरिएको छ । जसअन्तर्गत नेपाली सेनाले भरतपुर कारागार, भरतपुर विमानस्थल, नेपाल दूरसञ्चार कार्यालयलगायतका सरकारी तथा अर्धसरकारी कार्यालयको सुरक्षाको जिम्मा आइतबार देखि नै लिएको हो ।
त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी पनि निर्वाचन सुरक्षाको लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा क्याम्प खडा गरि परिचालन गरिएको छ । जसअन्तर्गत क्षेत्र नं. १ को वीरेन्द्रनगर गाविसमा प्रहरी नायव उपरीक्षक र क्षेत्र नं. २ को रत्ननगर नगरपालिकामा प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा सशस्त्र प्रहरीको गढिमाई गणअन्तर्गत परिचालन गर्न बेस क्याम्प स्थापना गरिएको छ ।
क्षेत्र नं. ३ को जिम्मा आँपटारीमा रहेको सीमा सुरक्षा बलले लिएको छ । त्यस्तै, क्षेत्र नं. ४ को शारदानगर र क्षेत्र ५ को जगतपुरमा सीमा सुरक्षा बल आँपटारी अन्तर्गतका सशस्त्र प्रहरीका जनशक्ति परिचालन गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्रराज शर्माले जानकारी दिए ।
नेपाल सरकारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि स्वीकृत गरेको एकीकृत सुरक्षा योजनाअनुसार अन्य सुरक्षा निकायसँग समेत समन्वय गरेर नेपाली सेनाले संवैधानिक कार्यादेशअनुसार काम गर्नेछ ।
स्थानीय प्रशासन, २०२८ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा क्षेत्रीय प्रशासकले अनुरोध गरेमा निर्वाचनका समयमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने काममा नेपाली सेनाले सहयोग पु¥याउने छ । सेनाले निर्वाचनमा सुरक्षा घेराको बाहिरी तहमा रहेर सुरक्षाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ ।
सुरक्षित र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन कार्यलाई सम्पन्न गर्न मतदानको तीन दिनअघि मतदान केन्द्र नजिक रणनीतिक विन्दु कायम गरी सुरक्षा प्रबन्धसहित सेना परिचालन हुनेछ । यसका अतिरिक्त सेनाले आपत्कालीन उद्धार, जगेडा जनशक्ति परिचालन, हेलिकप्टरको व्यवस्थापन, मतपेटिका र मतपत्र ढुवानी, हवाई वेस क्याम्प स्थापनालगायतका काममा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
त्यसका लागि नेपाली सेनाले जिल्ला, बाहिनी, पृतना र जङ्गी अड्डामा तुरुन्तै क्षेत्रगत तथा जुनसुकै ठाउँमा पनि परिचालन गर्न सक्ने जगेडा जनशक्ति पनि तयारी अवस्थामा राख्नेछ । आगामी संविधानसभाको निर्वाचनका लागि नेपाली सेनाले ६२ हजार जनशक्ति परिचालन गर्ने जनाएको छ । सुरक्षाका हिसाबले अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी निर्वाचन क्षेत्रलाई तीन चरणमा विभाजित गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम सहसेनानीको नेतृत्वमा ४० जनशक्ति रहने गरी सेनाको समूह खडा गरिएको छ ।
यसैगरी, अतिसंवेदनशिल र संवेदनशील मानिएका क्षेत्रमा सेनानीको नेतृत्वमा १०० जना जनशक्ति रहेको गुल्म खडा गरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।
निर्वाचनका लागि प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्ने, खटिएर जाने सेनाले स्थानीयस्तरमा अन्य सुरक्षा निकायसँग नजिकको सम्पर्क र समन्वयमा रही सैनिक सङ्गठनात्मक स्वरुपअनुसार परिचालित भई दिएको जिम्मेवारी सफलताका साथ पूरा गर्ने नेपाली सेनाका प्रवक्ता जगदीशचन्द्र पोखरेलले बताउनुभयो ।
हवाई जहाजबाट पुग्नुपर्ने केही हिमाली र पहाडी जिल्लाबाहेक अधिकांश जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली सेना आजैदेखि परिचालन भइसकेको बताउँदै प्रवक्ता पोखरेलले बाँकी क्षेत्रमा पनि एक दुईदिन भित्रै परिचालन हुने जानकारी दिनुभयो ।
भयावह सडक दुर्घटना